फिलीपींसबाट कस्तो आशा छ? एक फिलिपिनो को लागि - 1aviagem.com
अघिल्लो पोष्ट: तपाईंलाई खोपहरूका बारे कुन कुरा जान्नु आवश्यक छ
अर्को पोस्ट: फलामको बिना कपडा कसरी इस्त्री गर्ने
पोष्ट गरिएको 12 फेब्रुअरी 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
हामी बस रूसमा
आज हामी यस देशको बारेमा एकदम बढि जान्दछौं - आर्चिपिलिगो फिलिपिन्स भनिन्छ। हामी यस देशको बारे थप जान्न यो साक्षात्कारमा आउँदछौं, जुन एक सुन्दर एशियाई द्वीपपूर्वा हो। र कुनै पनि राम्रो एक हामीलाई फिलिपिनो भन्दा कमको बारेमा केहि बताउन। यसैले म आज मेरो फिलिपिन्स मित्रसँग कुरा गर्दैछु - जेफ।
मैले जेफलाई भेट्टाएपछि मेरो पहिलो भ्रमण रूसलाई, जुन पोल्याण्डमा विस्तार भयो। हामी मानिसहरू को एक समूह थिए जसले यो यात्रा गरे र हामी मित्र बन्न सक्यौं। जेफ धेरै उत्सुक मान्छे हो!
जेफ उत्सुक छ
र उहाँ पनि धेरै अनुकूल छ र राम्रो क्यामेरा कुञ्जी छन्। तपाईं उनीहरूको ब्लगमा आफैंलाई जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न चाहानुहुन्छ कि म अति विवादास्पद छैन: केवल पहुँच: http://jeffoutsidethebox.com/
र हो, उहाँ हो, वा थियो, एक ब्लगर नि: शुल्क समयको समयमा (जस्तै म अहिले गर्न प्रयास गरिरहेको छु)। त्यसैले यो यहाँ "ब्लगरहरूको पहिलो बैठक" हो (ब्लगबाट पहिलो यात्रा - 1aviagem.com)। तर उहाँ एक व्यावसायिक यात्री हुनुहुन्छ, म अझै पनि एक शौकिया हुँ।
जेफ, अहिले सम्म, केवल फिलिपिनो मलाई थाहा छ! ठीक छ, म फिलिपिन्स जान्न जाँदा यो अधिक फिलिपिन्स मित्रताहरु (LOL) थप्न को लागी परिवर्तन गर्न योजना बनाउँछु। र मलाई आशा छ कि तिनीहरू अनुकूल छ र धैर्य रूपमा हो।
तर यसको लागि मलाई फिलीपींसको बारेमा केहि आधारभूत जानकारी चाहिन्छ र त्यसैले जेफले यो साक्षात्कार गर्न आग्रह गर्नुभयो।
त्यसैले, आज फिलिपिन्सको बारेमा कुरा गरौं।
यस ब्लग मा अनुकूलन को रूप मा बोलने को लागि रंगीन रंगीन बनाउन को लागी यो आसान छ कि पाठक को को लागी को लागी को पहिचान गर्न को पहिचान गर्न को लागि बनाइनेछ। म मेरो भाषणको लागी नीलो पत्रहरू प्रयोग गर्नेछु र जेफ रातो अक्षर हुनेछ।
त्यो भनिएको छ, चल्न सुरु गरौं!
1 - जेफ, तपाईं कहाँ जन्मेको थियो? र तपाई आज कहाँ बस्नुहुन्छ?
म फिलिपिन्सको उत्तरी भागमा जन्मेको थिएँ, र म अहिले सैन फ्रान्सिस्को (यूएसए) मा बस्छु।
2 - तपाईंको काम के हो?
म एक नैदानिक ​​प्रयोगशाला वैज्ञानिक हुँ
3 - तपाईं किन विदेशमा बस्न जानु भयो?
इमानदारीपूर्वक, म राम्रो रोजगार र वित्तीय अवस्था खोज्दैछु।
4 - फिलीपींसको बारेमा तपाई के मनपर्छ?
हाम्रो आतिथ्य। हामीसँग एक गृह पर्यटनको नारा छ: फिलीपिइनसको कारण "फिलिपिन्समा यो धेरै रमाइलो छ"। हामी फिलिपिनो बिल्कुल मित्रवत र सजीव हो। तपाईं सहमत हुनुहुन्न?
हो, बिल्कुल सहमत! हाहाहा LOL
5 - तपाई त्यहाँ त्यहाँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ, यदि तपाईं सक्नुहुनेछ?
म फिलिपिन्सलाई माया गर्छु, तर त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन म चाहँदैनन्। पहिलो कुरा फोन हो "फिलिपिनो समय" - निर्धारित समयको तुलनामा मिनेट वा घण्टापछि आइपुगेको हो। दोस्रो कानूनको कमजोर प्रवर्तन हो। अर्को शहरी योजना हो भयानक। अर्को अनुशासन, भ्रष्टाचार, न्याय प्रणाली को कमी र यति कम छ। यदि म यीमध्ये धेरै परिवर्तन गर्न सक्दिन ... म कल्पना गर्न सक्दिन कि हामी कति सकिनौं।
6- मलाई थाहा छ तपाईं गीतहरूको लागि राम्रो मेमोरी छ, यो सांस्कृतिक हो, वा यो सिर्फ Jeff को एक विशेषता हो? (म यो भन्न चाहन्छु किनकि उसले कराओकेमा यात्रा गरेपछि)।
मलाई लाग्छ यो सांस्कृतिक छ। अधिकांश फिलीपिइनहरू गाई गर्न मन पराउँछन् (यदि तपाईं धुनभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ!) यो एक ईमान्दारिता हो कि हामी कराओकेलाई प्रेम गर्छौं। फिलिपिन्समा लगभग हरेक घर एक कराओके मिसिन वा जादू गाना माइक्रोफोन छ। कार्यालय, जन्मदिनमा एक पार्टीबाट सम्पूर्ण उत्सव, विवाहमा एक कराओके छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय स्तुति हो। यदि तपाईं यसमा राम्रो हुनुहुन्छ भने यो महत्त्वपूर्ण छैन, बस गाओ! त्यो हो।
7 - र के यो फिलीपींस 7.000 द्वीप भन्दा बढी छ भन्ने कुरा हो कि यो सत्य हो? र आधिकारिक भाषा के हो?
तिनीहरू 7.641 द्वीपहरू सही हुन सक्छन्! मलाई आश्चर्य छ कि हालको नम्बर जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिंगको कारण लामो हुनेछ। त्यसैले हाँ, फिलीपींसमा अन्वेषण गर्न तपाईं प्रतिदिन 20 द्वीपहरू भन्दा बढी हुन सक्नुहुन्छ!
फिलिपिन्स हाम्रो आधिकारिक भाषा हो, तर प्रायः फिलीपिइनहरू पनि अंग्रेजी बोल्छन्।
8 - तपाइँ भ्रमण गर्ने पर्यटकको लागि कुन यात्रामा फिलिपिन्समा पहिलो भ्रमणमा जानुहुन्छ?
म सधैं बोराकमा जान चाहन्छु। यो सेतो समुद्र तटको साथमा एक सुन्दर टापु हो, जुन मनीला दक्षिणमा 170 माइल दक्षिणमा स्थित छ। असुविधाजनक पर्यटनको कारणले गर्दा भारी क्षतिग्रस्त वातावरणको कारण हाल यो बन्द भएको थियो। अब छ महिनाको पुनरावृत्ति पछि, यो फेरि खोलिएको छ। र म यस प्रमोदवनलाई पनि भेट्नको लागि पर्खन सक्दिन। त्यहाँ त्यहाँ यात्रा गर्न, तपाईं यात्रा योजना पनि छैन। अन्य विकल्पहरू पलायन वा सेबू हुनेछ। अधिकांश मामलाहरूमा पर्यटकहरू अनपूठे समुद्र तटको खातिर फिलिपिन्समा आउँछन्।
Boracay मा जेफ बाट (http://jeffoutsidethebox.com/)
9 - तपाईंको ब्लग को बारे मा, के तपाइँ जारी राख्ने योजना छ?
मलाई मनपर्छ, तर म लेख्न धेरै सक्रिय छैन। शायद पोस्ट र इन्स्टाग्राम जस्तै सोशल मिडियामा लेख्नुहोस्, जुन गर्न सजिलो छ।
10- तपाई कतिवटा देश भ्रमण गर्नुभयो?
ठीक छ, म गिनती छुटेको छ ... तर मलाई निश्चित छ कि उनी 50 भन्दा बढी थिए।
वाह, म चाहन्छु म यो नम्बर पनि पाउन सक्दिन। LOL। म मेरो सबैभन्दा राम्रो हाहाहा गर्नेछु। (I.e.
11-Jeff, र तपाईं किन धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ?
म सधैं यात्रा गर्न चाहन्छु। मेरो विचारमा, तपाईंले यात्रा गर्दा तपाईका सम्झनाहरूको मूल्यमा राख्न सक्नुहुन्न। अन्य व्यक्तिले जीवनको साथ जीवन रोज्छ, तर मैले अनुभवको साथ जीवन रोजेको छु। भविष्यमा के हुनेछ भनेर हामी भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं र यदि मेरो जरुरी, पार्थिव वा शताब्दी हेर्न म बाँच्न सक्दिन भने, मलाई कुनै अफसोस छैन। त्यसैले म संसारसँग जोडिएको छु र म भरिएको छु।
ओह, त्यो सोचने को एक राम्रो तरिका हो!
जेफ, मलाई आशा छ कि तपाईं यो राम्रो ऊर्जा संसारभरि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। म हामी सबैलाई विश्वास गर्छु जब हामी कसैसँग कुराकानी गर्छौं, यदि हामी प्रेरणा लिन सक्छौं वा यो कसैलाई सहयोग गर्न सक्दछौं, यो संसार परिवर्तन गर्न एक राम्रो तरिका हो।
अनि संसारलाई अधिक मानिसहरू चाहिन्छ जुन अनुभवहरू बाँच्न र भौतिक वस्तुहरू, सम्पत्तिहरू बाँच्न बाँच्दैन।
र यहाँ हामी यो साक्षात्कार समाप्त गर्न जाँदैछौँ। धन्यवाद जेफ, दुनियालाई अधिक जेफ्स हाहाहा चाहिन्छ।
साक्षात्कारको लागि धन्यवाद, यो साँच्चै मजा थियो।
अधिक साक्षात्कारका लागि यो सुझावहरू र इतिहासको लागि, कृपया तल हाम्रो सानो नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्।
र फिलिपिन्समा पहिलो-पटक नाविकको लागि अन्तिम टिपको रूपमा मैले हिँड्ने छु कि म बुकबुक लिङ्क छोड्छु जुन अनलाइन सजिलो समय तालिकामा सरल र सजिलो छ।
यदि तपाइँ यसलाई मनपर्यो भने, तलको बटन थिच्नुहोस्। वा तपाईंको टिप्पणी छोड्नुहोस्, साझेदारी गर्नुहोस्, र हामीलाई विश्व प्ले गर्न मद्दत गर्नुहोस्। (I.e.